Andron'ny Fampihavanana Ao Atsimon'i Yemen	Voadika ny 16 Janoary 2013 22:27 GMT
Zarao: Vahoaka an'arivony avy amin'ny faritany enina ao atsimon'i Yemen no niara-nirohotra tao an-tanànan'i Aden nandritra ny andro vitsivitsy ho fandraisana anjara amin'ilay fetiben'ny “fampihavanana sy fifamelana”. Mankalaza ny fahatsiarovana ny ady an-trano tao Atsimon'i Yemen taloha izay niseho tamin'ny tamin'ny taona 1986 ny fetibe. Ny ady an-trano dia nifanandrinan'ny mandatehezana roa ka ny andaniny notarihan'ny Filoha Ali Nasser Mohammed ary ny ankilany notarihan'ilay lehiben'ny Sosialista an-tsesintany sady filoha teo aloha antsoina hoe Abdulfatah Ismail. Raha jerena ny niavian'ireo mpitarika roa ireo, Abyan sy Shabwa nandeha niara-dia tamin'i Ali Nasser Mohammed fa i Radfan sy Dhale kosa nanaraka an'i Abdulfatah Ismail. Avy eo no niaingan'ny gidragidra tamin'ny 13 Janoary 1986, izay nivadika ho adim-paritra sy naharitra amam-bolana, izay niafara tamin'ny fahafatesan'olom-pirenena sy miaramila an'arivony, ka anisan'izany i Abdulfatah Ismail.
Nalefa tao amin'ny Youtube ابو عبود (Abu Aboud) ny hira mifototra amin'ny lohahevitra fampihavanana sy fifamelàna: Hussein Yafei nisioka hoe:
@crazyyafai: Miezaka mafy hanavotra ny firaisan'i #yemen ny filoha Hadi saingy misompatra ny lalany ny jeneraly Ali Mohsen & lehiben'ny foko mpanao kolikoly. Summer Nasser nandefa lahatsoratra tao amin'ny Facebook-ny:
Ady & FifandiranaFanoheranaMediam-bahoakaPolitika